10 Iziphuzo Zotshwala Ukuzama Emhlabeni Wonke | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > 10 Iziphuzo Zotshwala Ukuzama Emhlabeni Wonke
Qeqesha Ukuhamba EBelgium, Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi China, Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi Czech Republic, Qeqesha Ukuhamba eFrance, Qeqesha Ukuhamba Germany, Qeqesha Ukuhamba Italy, Qeqesha Ukuhamba Portugal, Qeqesha Ukuhamba Spain, Izeluleko Zokuhamba Ngezitimela, Qeqesha Ukuvakasha UK, Izikhangibavakashi Europe
Ukupheka okuyimfihlo, ukuthanda okushaya ingqondo, futhi uphuze ngokweqile, ezomhlaba imigoqo engcono kakhulu namaqembu asebenzela lokhu 10 kumele-uzame iziphuzo zotshwala. Kusuka eChina kuye eYurophu, ezinye 10 iziphuzo zotshwala ukuzama emhlabeni wonke zineminyaka engamakhulu ambalwa ubudala. Noma kunjalo, zithandwa kakhulu, nokubamba isiphuzo noma 2, eholidini lakho kungokuhlangenwe nakho okungaphuthelwa.
1. Iziphuzo Zotshwala Ukuzama Emhlabeni Wonke: I-Aperol Spritz Italy
I-cocktail esekwe ewayinini, I-Aperol Spritz imnandi futhi izithako zayo zizokwenza ithiphu yesilinganiso esifanele ngaphambi kokufika kwezifundo eziyinhloko. I-Spritz iyisidambisi esidumile sakudala eNyakatho ye-Italy, okokuqala kwavela eVenice. I-spritz iyinhlanganisela yeCampari, prosa, namanzi wesoda, eqhweni, ngakho-ke ilungele ukuvuselelwa idolobha lakho lekhefu leholide.
Cishe uzobona isiphuzo esinombala obomvu osawolintshi ezingilazini zewayini eziphezulu, cishe kuwo wonke amatafula e-Italy. I-Aperol spritz iyaqabula futhi ilungele izinsuku zasehlobo ezishisayo zaseMedithera, ngakho-ke kufanele uzame lesi siphuzo esidakayo lapho udla e-Italy.
2. Qeda uFrance
Ngemuva kokuvinjelwa 100 iminyaka eFrance, i-Green Fairy isiyathola ukuthandwa emuva. Lesi siphuzo esidakayo esiluhlaza sasiyintandokazi kubabhali nabaculi baseParis 19-20th ekhulwini, ikakhulukazi eMontmartre. I-Absinthe ingenye ye- 10 iziphuzo ezinamandla zotshwala ukuzama emhlabeni wonke.
Namuhla, ungaba nesibhamu se-absinthe, kodwa ukudubula kuphela ngoba lesi siphuzo sinamandla kakhulu, ezinkantini eziningi eParis. La Fee Verte, Lulu Mhlophe, IL’Absinthe Cafe, ezinye zezindawo ezinhle kakhulu lapho ungazama khona isiphuzo esiqine kakhulu emhlabeni. Nokho, izithako eziyisisekelo ozozinambitha kuzo zonke izinhlobo ze-absinthe yi-anise, izimbali zomhlonyane, nepeni elimnandi.
3. ISangria Spain
Mhlawumbe ubungazi ukuthi i- "Sangria" isuka egameni elithi "Sangre", igazi, ngeSpanishi. Akukho okumele ukhathazeke ngakho maqondana nalezi zithako zotshwala, leli gama elikhethekile libhekisela kuphela kumbala oqinile obomvu. Akukho okungcono kunenkomishi yeSangria ntambama ngesidlo sePaella.
AmaRoma angabokuqala ukudala iSangria ngamagilebhisi eNkathini Ephakathi. Isiphuzo samagilebhisi saba isiphuzo esidakayo sotshwala ngemuva kwengcosana yotshwala ukugcina amagciwane ekude. I-sangria yendabuko yenziwa ngamagilebhisi e-Tempranillo, ikhule esifundeni saseRioja, Spain. Nokho, ungazama lesi siphuzo esidakayo esimnandi yonke indawo eSpain nasePortugal.
Izindawo ezimbalwa ezinconyiwe ezine-Sangria ehamba phambili e-Barcelona: cava ne-Sangria ebomvu e-Arcano, ikhabe ne-Sangria kumathikithi.
4. UGin England
I-gin yafika okokuqala eBrithani isuka eHolland ngekhulu le-18. Isizathu ukuthi i-Gin yenziwa ngamajikijolo asendle, ngakho-ke iGin isiphuzo esenziwe ngamajikijolo esihlanganiswe nesoda, amanzi, futhi kwesinye isikhathi i-sweetener. I-gin kwakuyisiphuzo sokuqala esaletha abesifazane nabesilisa ndawonye ezinkantini ezingaphesheya kweNgilandi. Isizathu izinga eliphezulu lotshwala, ukwenza konke ukuvinjelwa kunyamalale.
Namuhla, I-Gin ixutshwe nezithako ezahlukahlukene: i-mint, izingcezu zikalamula ezosiwe, peppercorns, kanye namanzi abomvu-orange. Njengoba uGin ephuza ngokweqile, uzodakwa ngokushesha kunejubane lokukhanya. Ngakho, kuyalulekwa ngaso sonke isikhathi ukuhambela imigoqo eqenjini. Ngale ndlela uvikelekile kokukodwa umkhonyovu omkhulu wokuhamba ukugwema umhlaba wonke, njengendawo enobungani efihlekile.
5. I-Becherovka Czech Republic
Utshwala obudumile baseCzech Republic ubhiya. Ubhiya lushibhile kunamanzi aseCzechia, futhi ababaningi abazi ukuthi isiphuzo esidakayo kumele sizanywe yiBecherovska. Kulungile, isiphuzo esinamandla kakhulu seBecherovska sithandwa kakhulu ebusika. Lesi siphuzo siqukethe ngaphezu kuka 20 izinhlobo zamakhambi, Isinamoni sinandiwe, kuxutshwe nepheya noma ujusi kaphayinaphu. Lokhu kungenxa yokunambitheka okuqinile kwezokwelapha, futhi kunjalo 38% utshwala.
Indawo engcono yokuzama i-Becherovska ise-Becher's Bar. Le bar epholile iqanjwe ngoJosef Vitus Becher, owaguqula utshwala baba ngumuthi wokugaya ukudla, ophuzweni olubabayo namuhla, buyela emuva 1807.
6. IPimm’s Cup i-United Kingdom
Ukuya embukisweni waminyaka yonke waseWimbledon noma weChelsea ngeholide lakho lesiNgisi? Cishe uzophuza okungaphezulu 1 indebe yePimm. IPimms isiphuzo sokugcina sasehlobo emicimbini yaseNgilandi yasehlobo, mnandi, iced, futhi wakhonza ngezithelo, ilungele izinsuku ezishisayo zasehlobo.
Nokho, ungaphutheli lesi siphuzo esinezithelo sibe yisibhakela nje esihle, ngoba empeleni iqukethe 25% utshwala. Ngaphezu kwalokho, I-Pimms isekelwe e-gin engeza emazingeni ayo otshwala, ngakho-ke ungahle ungaboni ukuthi kanjani 1-2 iziphuzo zikuthola ngaphezu kwe-tipsy ku- imicimbi yasehlobo enkulu yaseBrithani.
7. Iziphuzo Zotshwala Ukuzama Emhlabeni Wonke Ebusika: Gluhwein
Isikhathi sikaKhisimusi singesinye sezikhathi ezihamba phambili zokuhamba eYurophu, futhi izimakethe kaKhisimusi kukhona ukukhanga okumangalisa kakhulu. I-Gluhwein iyiwayini elimangalisayo elimnandi, futhi ungayinambitha ezimakethe zikaKhisimusi eJalimane, Austria, naseSwitzerland, vele ulandele izixuku ezijabulayo.
Ngokungafani newayini elibomvu, IGluhwein imnandi, kuxutshwe nolamula, izinongo, nesinamoni. Ngaphezu kwalokho, uzoyithenga ifudumele, ngakho-ke izokunikeza ikhefu elimnandi neliduduzayo lokuzulahamba ebusika obubandayo baseYurophu. Ngokuphambene neziphuzo ezibandayo zezulu, I-Schnaps iyindlela enhle yokuphuza iziphuzo ezidakayo ukuzama lapho use-Europe.
8. Utshwala Buphuza Ukuzama EChina: Utshwala bukaMaotai
Utshwala bukazwelonke baseChina baseMaotai benziwa esifundazweni saseGuizhou. UMaotai wakhiqizwa okokuqala ngesikhathi sobukhosi bakwaMing ngekhulu le-16. Lesi siphuzo esidingekayo samaShayina sotshwala senziwe okusanhlamvu ngenqubo ethatha iminyaka embalwa kuze kube yile ngxube ukuze utshwala buphefumule kahle.
Ngakho, uma ukuhamba eChina, bese uzama lesi siphuzo esiyingqayizivele seMaotami. Kungcono ukuyinambitha 20-25 amazinga okushisa, engilazini ekhethekile emise okwe-tulip. Lokhu kuzokuvumela ukuthi unambithe iphunga elicebile neligxile lalesi siphuzo esiphundu esiphundu sase-Chinese.
9. IGrappa Italy
Ungayinambitha le pomace emnandi – I-brandy yamagilebhisi iyathandwa eNyakatho ye-Italy, Switzerland, neSan Marino. Ngenkathi uphuza i-Aperol ngesidlo sasemini, i-grappa isiphuzo sangemva kwesidlo, ukusiza ukugaya ukudla okusindayo kwe-pasta noma kwe-pizza. Ngakho-ke, ngokungafani newayini elijwayelekile uzophuza izingilazi zewayini eziphezulu, i-grappa izofika ngezingilazi ezincane ze 1-2 ama-ounces.
Ngaphezu kwalokho, ungazama iGrappa kanye ne-espresso emfushane, noma ngisho ukunambitha kuhlanganiswe nama-cocktails, noma kunjalo, uzokujabulela ukuzama lesi siphuzo esidumile sase-Italy, futhi kufanele uyinamathisele ekudleni naseziphuzweni zakho okufanele uzame e-Italy.
10. UJenever Belgium
Iziphuzo ezindala kakhulu eYurophu, UJenever ungumsuka weGin. Nokho, namuhla lezi ziphuzo ezimbili yiziphuzo ezimbili ezihluke kakhulu zotshwala. Lapho useBelgium ungazama iGenever endala nentsha, iGen encane njengesidakamizwa, ngenkathi iGen endala ngemuva kokudla kwakusihlwa njengokugaya ukudla.
IJenever ingumoya waseBelgium ongaphezu koku 500 iminyaka. Abaningi baya eBelgium ngenhloso yokunambitha ubhiya ohamba phambili waseBelgium. Noma kunjalo, UJenever yisiphuzo sendabuko esidakayo eBelgium. Uma ufisa ukubhidliza iBelgium Jenever njengesikhumbuzo, funa ibhodlela elenziwe ngobumba, amajeke wesakhiwo sodumo agcina lo tshwala obumangalisayo.
I-Antwerp iya eBrussels Ngesitimela
I-Amsterdam iya eBrussels Ngesitimela
EParis eya eBrussels Ngesitimela
Lapha e Londoloza Isitimela, sizojabula ukukusiza uhlele iholide lakho emhlabeni jikelele. Amabha amahle kakhulu, ezinkantini, nezindawo zokuzama lezi 10 iziphuzo ezidakayo emhlabeni wonke zihamba uhambo lwesitimela.
Ngabe ufuna ukushumeka okuthunyelwe kwebhulogi lethu “Iziphuzo Ezingu-10 Zotshwala Zokuzama Emhlabeni Wonke” kusayithi lakho? Ungakhetha ukuthatha izithombe zethu nombhalo futhi asinike credit enesixhumanisi lokhu post blog. Noma chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fzu%2Falcohol-drinks-worldwide%2F- (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)
#iziphuzo Alcohol AlcoholDrinks AlcoholDrinksWorldwide PopularAlcoholDrinks